အကောင်းဆုံးလက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများ ၁၀ ဘယ်ဘက်လက်ဆံပင်ညှပ် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
အကောင်းဆုံးလက်ဝဲဆံပင်ညှပ်ကတ်ကြေးထိပ်ဆုံး ၁၀ Lefty ညှပ်
ဇွန်အိုး ဇန်နဝါရီလ 29, 2019 ဖတ်ပြီးသားမိ 10
ကျွန်ုပ်တို့သည်သြစတြေးလျနိုင်ငံ၏အညွန့်ပေါင်း ၁၀ ခုကိုရွေးထားပါသည် ထိပ်တန်းအရောင်းအ ၀ ယ်အားလုံးအတွက်, ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း, ဖောက်သည် ratings, ကတ်ကြေးထုတ်လုပ်သူသမိုင်း နှင့် ဂုဏ်သရေ, ပြီးနောက် ငွေအတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုး.
Joewell LC ဆံပင်ညှပ်ဖြတ်
အကောင်းဆုံး Lefty သတ်မှတ်မည်
အကောင်းဆုံး Entry ကတ်ကြေး
Jaguar Pre Style လက်ဝဲ
Micro Serrated Blade ကို
Yasaka ကတ်ကြေးဖြတ် offset
လက် Adjustable တင်းမာမှု
အကောင်းဆုံး Entry Set
Mina Umi ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာစေခြင်း
လက်ဝဲဆံပင်ကတ်ကြေးဝယ်ဖို့သိကောင်းစရာ ၃ ချက်
လက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်အခြားဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များနှင့်တူသည်။ သို့သော် lefty pair အသစ်တစ်ခုကိုဝယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာကိုရှာဖွေသင့်သနည်း။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် lefty ကတ်ကြေးဝယ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော“ လိုအပ်သောသိရန်” အခြေခံအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
လက်ယာဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကို ၀ ယ်သောအခါ ၅ လက်မ၊ ၅.၅ လက်မနှင့် ၆ လက်မများမကြာခဏတွေ့ရသည်။ လက်ဝဲလက်ညှပ်များတွင် ၅.၂၅ "၊ ၅.၆" နှင့် ၅.၇၅ "ညှပ်အရွယ်အစားတို့ကိုတွေ့ရသည်။
သံသယရှိပါကအထင်ရှားဆုံး lefty ကတ်ကြေးအရွယ်အစားမှာ ၅.၅ "နှင့် ၅.၇၅"၊ အထီး "၆.၀" နှင့် "၆.၂၅" ဖြစ်သည်။
လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးများသည်ပုံမှန်ကတ်ကြေးများနှင့်မတူပါ။ ဤတွင်သြစတြေးလျတွင်လက်ဝဲဆံပင်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုလေ့နှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြပါ။
အတို Lefty ကတ်ကြေး
လက်ဝဲလက်တိုဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများသည်အရွယ်အစား ၄.၅ လက်မှ ၅.၂၅ လက်မအကြားရှိသည်။ ဤရွေ့ကားခရီးဆောင်ဖြစ်ကြပြီးဆံပင်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းစနစ်အများစုနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
ရှည်လျားသော Lefty ကတ်ကြေး
ရှည်လျားသောဓါးရှည်သည်ဘယ်သန်သန်မာသောအရွယ်အစား ၆.၅ လက်မမှ ၇.၂၅ လက်မအကြားရှိသည်။
Lefty ကတ်ကြေးဒီဇိုင်း & ပါးလွှာ
လက်ဝဲပါးလွှာမှုနှင့် texturising ကတ်ကြေးများသည်အမြင့်ဆုံးအရွယ်အစားဖြစ်ပြီး ၅.၅ လက်မမှ ၆.၂၅ လက်မရှိသည်။
အများဆုံးတွေ့ရတတ်သည့် lefty ပါးလွှာသောကတ်ကြေးများတွင်သွား ၃၀ မှ ၄၀ ကြားရှိသည်။
လူကြိုက်အများဆုံးလက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးလက်ကိုင်များသည်သင့်ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များအပေါ်ဖိအားမပေးဘဲဆံပင်ညှပ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်ပံ့ရန် ergonomics ဖြစ်သည်။
ဘယ်ဘက်လက် offset လက်ကိုင်သည်ဆံပင်ကတ်ကြေးများပေါ်တွင်ကြာရှည်စွာဖြတ်တောက်သောပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏ထောင့်များသည်ထောင့်များသည်သင့်လက်ဝဲလက်ကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုပြီး၎င်းသည်အဆင်ပြေသောဖြတ်တောက်ခြင်းအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းသည်
lefty positioned လက်ကိုင်ဖြင့် offset ကတ်ကြေးများသည်လုံခြုံသောဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးသော ergonomic ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဆန့်ကျင်သော (အချိုးကျ) လက်ဝဲလက်ကိုင်သည်ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်နှင့်ဆံပင်အရောင်းဆိုင်များတွင်တွေ့ရသောဒုတိယအများဆုံးအသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။
Opposing ဂန္ထဝင်လက်ကိုင်များသည် ergonomics မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်လေးလံသောဝန်ကိုမထားကြပါ
Crane စတိုင်လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးလက်ကိုင်များသည်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်ရရှိနိုင်ဆုံးသောစီးပွားရေး (ဆုံလည်မဟုတ်သော) ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
Crane လက်ကိုင်သည်အခြေခံ offset ညှပ်ခြင်းထက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသော offset တွန်းအားပေးခြင်းနှင့်ပိုမိုသောအသိုက်နှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိသောထိန်းချုပ်မှုကိုပေးသည်။
မည်သည့်လက်ဝဲလက်တံကတ်များကိုသင် ၀ ယ်သင့်သည်ကိုမသေချာပါကလူကြိုက်အများဆုံးနှင့်များသောအားဖြင့်ရောင်းဝယ်သော lefty shears များကို အခြေခံ၍ နမူနာအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ: ၅.၅ လက်မလက်ဝဲလက်ကိုင်အကျီအတိုဓါးတိုကတ်ကြေး
ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများ: ၆ လက်မလက်ဝဲဘက်အလှ ဓါးတို ကပျကြေး
အမျိုးသမီးဆံများ - ၆.၅ လက်မလက်မရှည်သောဓါးဒဏ်ရာများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်
အထီးဆံ: 7.0 "လက်မ lefty offset ရှည်လျားသောဓါးညှပ်
ထိပ်ဆုံးဆံပင်ညှပ်ဖြတ်အကောင်းဆုံးထိပ်ဆုံး ၁၀ ခု
1. Joewell LC လက်တံဖြတ်တောက်ခြင်းလက်ဝဲ
Joewell ဂျပန်မြောက်ပိုင်းမှဖြစ်ပြီးဆံပင်ပုံစံအားလုံးကိုအသုံးပြုရန်သင့်တော်သော ၄ င်းတို့၏ထူးခြားသည့်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
မှပိုမိုကြည့်ရှုပါ - Joewell ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်
✔️ ချွန်ထက်သောဂျပန် Joewell ဓါးရွက်
❌ Joewell စံဓါးသည်ခုံးအစွန်းကဲ့သို့လူကြိုက်များမည်မဟုတ်ပါ
Joewell LC ကတ်ကြေး
2. Ichiro နှင်းဆီလက်လက်ညှပ်သတ်မှတ်မည်
လူကြိုက်အများဆုံးလက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးကို Japan Scissors online platform တွင်ထားရှိသည်။ ၄၄၀C သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး offset ergonomics ဖြင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းနည်းစနစ်အများစုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Ichiro လက်ဝဲလက်ပုံစံများသည်အပြောင်ဆုံးဖြတ်တောက်မှုများနှင့်လက်ဖြင့်ညှိနိုင်သောတင်းမာမှုအတွက်ခုံးအနားသတ်ခုံကိုအသုံးပြုသည်။
မှပိုမိုကြည့်ရှုပါ - Ichiro ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်ပါ!
✔️ 440C သံမဏိ
✔️ ခုံး Edge Blade ကို
Ichiro နှင်းဆီ Set
3. Jaguar လက်ဝဲလက် Relax ကတ်ကြေး
အဆိုပါ Jaguar လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးများသည်ဖဲကြိုးများ၊ သော့ခလောက်ညှိနိုင်သောတင်းမာမှုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ညှပ်သူများအတွက်အလင်းမျှတသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။
မှပိုမိုကြည့်ရှုပါ - Jaguar ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်
✔️ အော့ဖ်လိုင်း Ergonomics
✔️ Micro Serrated ဓါးသွား
Jaguar Lefty ကတ်ကြေး
4. Yasaka လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေး
Yasaka ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Nara ရှိလက်ဝဲလက်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းတို့ကိုထုတ်လုပ်သည်။
အဆိုပါ Yasaka Lefty shears များသည် offset ergonomics၊ clam-shaped ခုံးအစွန်းဓါးများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပေါ့ပါး။ မျှတသောဒီဇိုင်းကိုအသုံးပြုသည်။
မှပိုမိုကြည့်ရှုပါ - Yasaka ဒီမှာ Scissosr အမှတ်တံဆိပ်!
Yasaka Lefty ညှပ်
5. Mina Umi လက်ဝဲလက်ညှပ်သတ်မှတ်မည်
Mina Umi ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များအတွက်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းကဲ့သို့အိမ်တွင်းဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့ထိရောက်သောအကျော်ကြားဆုံးလက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Umi ကတ်ကြေးများသည်ချွန်ထက်သောပြားချပ်ချပ်ဖြင့်အသုံးပြုထားသောသန်မာသောဒီဇိုင်းနှင့် ၃၀ မှ ၄၀% ဖြတ်သောအချိုးအစားရှိသောပါးလွှာသောကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုထားသည်။
ကနေပိုပြီးရှာဖွေပါ: ﻿Mina ဒီမှာကတ်ကြေးတံဆိပ်
✔️ Sharp All-Round ဒီဇိုင်း
❌ ပိုပြီးမကြာခဏထက်ထက်မြက်လိုအပ်နိုင်ပါသည် Joewell or Yasaka ညှပ်
လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးနဲ့ဆံပင်ကိုဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲဆိုတာရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း ၅ ချက်
လက်ဝဲလက်ဖြင့်လူ ဦး ရေသည်ကမ္ဘာ့လူ ဦး ရေ၏ ၁၀% ရှိသော်လည်းသြစတြေးလျတွင်ဆံပင်အလှပြုပြင်သူနှင့်ဆံပင်ဘယ်လောက်ရှိပါသနည်း။
ဒါကြောင့်လက်ဝဲယိမ်းသူတွေဟာအိမ်မှာဖြစ်စေ၊ ဆံသဆိုင်၊ ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်မှာဆံပင်ကိုဘယ်လိုဖြတ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက် ၅ ချက်ကိုအတူတကွစုစည်းထားတယ်။
Left Handed (Lefty) ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသည်ကတ်ကြေးရောင်းအား၏ ၂၀ မှ ၃၀% အထိရှိသည်။ သို့သော်မော်ဒယ် ၅၀ တွင် ၁ ခုသာအထူး Lefty ကတ်ကြေးပုံစံရှိသည်။
ဆံပင်ညှပ်သမားကောင်းတစ် ဦး သည်ပြီးပြည့်စုံသောပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးလက်ဝဲလက်တံကတ်ကြေးများကိုလက်ဝဲပညာရှင်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သင်လက်ဝဲ ထား၍ သင့်တော်သောကိရိယာများမရှိပါကဆံပင်ညှပ်ခြင်းကိုစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သင်က၎င်းကိုလွယ်ကူစွာနှင့်တိကျစွာကိုင်တွယ်နိုင်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကိရိယာတစ်ခုလိုချင်သည်။
Lefty Scissors ကိုရှာပါ
ဒါဟာအားလုံးလက်ဝဲ - ခံစားအကြောင်းကိုပါ! သင်ကလက်ျာလက်ညှပ်များကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်း သုံး၍ မရနိုင်ပါ။
လက်ဝဲဘက်သူတစ် ဦး သည်လက်ျာလက်ကတ်ကြေးကိုကောက်ယူပါကကိုင်တွယ်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းသည်သဘာဝနှင့်မသက်မသာအနေအထားတွင်ရှိလိမ့်မည်။
လက်ဝဲလက်သည်များသည်လက်ျာလက်ကတ်ကြေးကိုအသုံးပြုပုံနှင့်ပတ်သက်သောပြisနာမှာ၎င်းသည်သင်၏လက်၌ callouses ကဲ့သို့သောအမြဲတမ်းပျက်စီးမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆံပင်ပညာရှင်များအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ခုမှာဓါးသွားအရှည်နှင့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်ကျွမ်းကျင်သူအားလုံးသည် ၄.၅ လက်မမှ ၇ လက်မအထိဘယ်လက်ဆံပင်အလှပြင်သူများအတွက်သံမဏိဓါးများဖြင့်အကြံပြုခဲ့သည်။
ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဂျူလီဖာနန်ဒက်စ်က“ ကျွန်တော်က ၇ လက်မသုံးတယ်။ "စက်မှုလုပ်ငန်းအရွယ်အစားဟာ ၅.၅ လက်မဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိန်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးအားလုံး ၇ လက်မ (၇ လက်မ) ကိုအသုံးပြုတယ်"
ကျနော်တို့ဂျပန်နှင့်ဂျာမန်ကတ်ကြေးများအပေါ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ Scissor Expert မဂ္ဂဇင်းမှ Trevor Morgan က“ ဂျပန်သံမဏိလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဝဲလက်တံကတ်များသည်အရည်အသွေး၊ ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တို့အတွက်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းကြောင်းကျွမ်းကျင်သူများကသဘောတူကြသည်” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။
လက်ဝဲပါးပါးလွှာသောကတ်ကြေးများကိုဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်ရွေးချယ်သောအခါ Elizabeth လိရှဗက်အားကျွန်တော်မေးခဲ့သည်။
အကယ်၍ သင်ကထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် Yasaka, ကျောက်တံတား, Jaguaror Fuji MoreZ သူတို့အားလုံးသည်စျေးကွက်ထဲရောက်နေစဉ်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်သည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်သက်သေပြခဲ့ကြသောကြောင့်သူတို့အားလုံးအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ငါကိုယ်တိုင်သုံးတယ် Yasaka နှင့် Juntetsu သည်ပါးလွှာမှုကိုဆံပင်ပါးစေသည့်အခါအလွန်ကောင်းသောခံစားမှုနှင့်ရလဒ်ကိုအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းရှိသောကြောင့်ပါးလွှာမှုအတွက်ဖြစ်သည်။ ”
လက်ဝဲဘက်ကတ်ကြေး (၆) လုံးကိုစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်
Ian Hannagan Professional Hairdresser သည်နှစ် ၃၀ အတွေ့အကြုံရှိပြီး Hair Care International ၏ပိုင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စမ်းသပ်ခန်းသို့လာပြီးကူညီသည်။ သူကသြစတြေးလျနဲ့နိုင်ငံတကာမှာဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှာလေးစားခံရတဲ့အတွက် Ian နဲ့စကားပြောရတာအရမ်းပျော်တယ်။
လက်ဝဲ - ခံစားမှုအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောအဆင့်မြင့်သံမဏိကတ်ကြေးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတ်ကြေးများကိုဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းသုံးခုဖြင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အသေးစိတ်မပြောပဲဟနန်ဂန်ကပြောကြားခဲ့သည်။ Yasaka, Jaguar နှင့် Juntetsu ထုတ်ကုန်အမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်ဘယ်သန်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သံမဏိကတ်ကြေးများကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုပိုမိုတိကျစေပြီးကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များနှင့်ရလဒ်များအားဖြင့်လည်းအလွန်ကျေနပ်အားရကြပါသည်။
အကောင်းဆုံးလက်ဝဲလက်ကတ်ကြေး & ပါးလွှာ
နံပါတ် ၁ လက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းပိုမိုပါးလွှာပါသည်
Jaguar လက်ဝဲလက် Thinning ကတ်ကြေး
Lefty Scissors ဆိုတာဘာလဲ။
လက်ဝဲကိုင်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်လမ်းညွှန်အတွက်၎င်းသည်လက်ျာလက်ကိုင်၊ သံမဏိ၊ ဓါးနှင့်အရွယ်အစားကိုရှာဖွေသကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။ အောက်မှာ စုံလင်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ၂၀၂၀ ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးများဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှအရည်အသွေးကောင်းသော lefty ကတ်ကြေးတစ်စုံဥပမာ။
သင်သည်ပျောက်ဆုံးနေသောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာကတ်ကြေးအသေးစိတ်ကိုသတိပြုမိပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။ သင်နှင့်လည်းအတည်ပြုပါလိမ့်မည်။ :)
နိဂုံး - ဘယ်လက်ဝဲလက်ကတ်ကြေးကိုငါဘယ်လိုရွေးမလဲ။
အကောင်းဆုံးသောဆံပင်ကတ်ကြေးရွေးချယ်မှုဖြင့်သင့်ကိုမြင်တွေ့လိုပြီးလက်ဝဲဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်ဆံပင်ကို LEFTY လက်ကိုင်များကိုသာအသုံးပြုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
အရွယ်အစား ၅.၅ လက်မမှ ၆.၂၅ လက်မရှိသည်
Offset နှင့်ဆန့်ကျင် (ဂန္ထဝင်) lefty လက်ကိုင်ဒီဇိုင်း
ညှပ်နှင့် texturising အဘို့အသွား 30-40
ဘယ်ဖက် handers တွေကဆံပင်ညှပ်ဖို့အထူးကတ်ကြေးလိုပါသလား
လက်ဝဲကိုင်သူများသည်သင့်လက်ချောင်းများ၊ လက်မ၊ တံတောင်ဆစ်နှင့်သင့်ကိုအဆင်ပြေသောဖြတ်တောက်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်ဘယ်ဘက်လက်အနေအထားတွင်ထောင့်ထားသည့်ထူးခြားသောလက်ကိုင်များရှိသည့်အထူးကတ်ကြေးများလိုအပ်သည်။